हाँस्ने शैलीबाटै थाहा हुन्छ मान्छेको स्वभाव, तपाइँ कस्तो हाँस्नुहुन्छ ? - News Bihani
एजेन्सी : हास्नु स्वास्थ्यको लागि निकै फाइदाजनक हुन्छ। भनिन्छ जो हाँस्छ उहि बढी बाँच्छ। यो चिकित्सकबाट नै प्रमाणित कुरा हो। हाँसो भनेको एक प्रकारको औषधि नै जसका फाइदै फाइदा छन्। हाँसो स्वास्थ्यको लागि मात्र नभई शत्रुलाई जित्ने बलियो हतियार पनि हो।
समान्यतया: व्यक्ति अनुसार, हाँसो पनि फरक फरक हुन्छ। कोही हाँस्दा मुसुक्क मुस्कुराउँछन् भने कोही दिल खोलेर हाँस्छन्। समुन्द्र शास्त्र अनुसार, व्यक्तिको हाँस्ने शैलीका आधारमा उसको स्वभाव पत्ता लगाउन सकिन्छ।
यसरी थाहा हुन्छ हसाईबाट मानिसको स्वभाव :-
१. खित्का छाडेर हाँस्ने व्यक्ति :– जो व्यक्ति दिल खोलेर अर्थात खित्का छाडेर हाँस्छन्, त्यस्ता व्यक्ति निकै उत्साही प्रवृत्तिका हुन्छन्। त्यस्ता व्यक्तिको बौद्धिक क्षमता पनि सामान्य भन्दा बढी हुन्छ। यस्ता व्यक्ति निकै सहनशील पनि हुन्छन्। उनिहरुको मनमा कुनै पनि प्रकारको छलकपट हुँदैन। यतिमात्र होईन यस्ता व्यक्ति परेको बेला जे पनि सहयोग गर्न तयार हुन्छन्।
२. जोड–जोडले आवाज निकालेर हाँस्ने व्यक्ति :- कोही व्यक्ति हाँस्दा जोड सँग आवाज निकाल्छन्। जो त्यसरी हाँस्छ त्यस्ता व्यक्ति निकै स्वाभिमानी तथा मेहनती हुन्छन्। प्राय यस्ता व्यक्ति जीवनमा सफल पनि हुन्छन्।
३. मन्द मुस्कानसहित हाँस्ने व्यक्ति :- जुन व्यक्ति मुसुक्क मुस्कुराएर हाँस्छन् उनीहरु निकै बुद्धिमानी र गम्भीर प्रवृत्तिका हुन्छन्। यस्ता व्यक्ति चाँडो रिसाउँदैनन्। यीनिहरु कठिन समयमा धैर्यताका साथ आफ्नो काम सफल गर्छन्।
४. रोकिएर हाँस्ने व्यक्ति :– केही व्यक्तिको बानी रोकिने र हाँस्ने हुन्छ। समुन्द्रशास्त्र अनुसार, यस्ता व्यक्तिको बौद्धिक क्षमता सामान्य हुन्छ। यस्ता व्यक्ति विवेकको सट्टा भावनाले निर्णय लिन्छन्। तर यसरी हाँस्ने व्यक्तिको बचत गर्ने बानी भने विशेष प्रकारको हुन्छ।